नेफ्स्कूनका ‘फ्रन्टलाइनर’हरु –२ :: Sahakari Akhabar
नेफ्स्कूनका ‘फ्रन्टलाइनर’हरु –२
२०७७ असार ५ गते , शुक्रवार Sahakari Akhabar
(देशभरका वित्तीय सहकारीको अभिभावक निकाय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.–नेफ्स्कूनको देशभर २६ फिल्ड कार्यालय सञ्चालनमा छन् । केन्द्रीय कार्यालयसँगै सबै फिल्ड कार्यालयका कर्मचारीहरुले लकडाउन सुरु भए देखि नै उच्च जिम्मेवारीबोधका साथ सदस्य संस्थाहरुलाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ । यस क्रममा सबैको प्रयास स्तुत्य छ । त्यसमा पनि फिल्ड र बिशेष जिम्मेवारीसहित अग्रमोर्चामा व्यक्तिगत सुरक्षा विधिहरु पूर्णतः अबलम्बन गर्दै खटिदै आउनुभएका फ्रन्टलाइनरहरुको व्यक्तिगत जीवन, लकडाउन र कार्यालय सञ्चालन आदि विविध विषय समेट्ने सिलसिला अन्तर्गत रञ्जनमणि पौड्यालले दोस्रो सामाग्री तयार पार्नुभएको छः)
अन्तर्लगानी अधिकृत, नेफ्स्कून केन्द्रीय कार्यालय, नयाँ बानेश्वर
जन्म, परिवार र सहकारी जीवन
२०४९ साल असोज १८ गते रामेछाप जिल्ला देउराली गा.वि.स. वडा न. ५ मा मेरो जन्म भएको हो । हाल म काठमाडौं पेप्सीकोलामा बुबा, मम्मी, श्रीमती र छोराका साथ बस्दछु । करिब साढे ३ वर्ष यो जिम्मेवारीमा रहेपनि सहकारीमा भने २०६८ सालदेखि नै विभिन्न भूमिकामा संलग्न रहँदै आएको छु ।
लकडाउनको पहिलो सातासम्म दिन कटाउन एकदम गाहे भयो । त्यसरी घरभित्रै बस्ने बानी नभएका कारण एक किसिमको छटपटी भयो जुन स्वाभाविक थियो भन्ने लाग्छ ।
फेरि हामी बजारमा बढी हिड्डुल गर्ने भएका कारण पनि एक ठाउँमा बस्न मुश्किल हुँदो रहेछ । एक सातापछि काममा ब्यस्त हुन थालेपछि भने क्रमशः सहज हुँदै गयो ।
परिवारसँग चलचित्र हेर्ने, पुस्तक पढ्ने, एम.बि.ए को थेसीस तयारी, कार्यालयको आन्तरिक प्रतिबेदन तयारीका साथै फिल्ड कार्यालयका साथीहरुसँग समन्वय गर्दै समय बिताइयो ।
लकडाउनमा कार्यालय सञ्चालन
चैत्र महिना भर सदस्य संस्थाहरुलाई आवश्यकता अनुसार सम्पर्कको आधारमा सेवा प्रदान गरियो, त्यसपछि प्रायः नियमित रुपमा निश्चित समय कार्यालय खोलेर नै सेवा प्रबाह गरिदैं आएका छौं ।
नेफ्स्कूनले बन्दाबन्दीको अवधिमा वित्तीय सहकारीहरुलाई संस्था संचालनको लागि प्रभावकारी मार्गनिर्देशन जारी गरेको र हरेक परिस्थितिमा सदस्य संस्थाहरुलाई पुर्ण रुपमा वित्तीय र गैर वित्तीय सेवा प्रदान गरेको कारण सदस्यहरुबाट सकारात्मक सुझाब प्राप्त गर्नुका साथै वित्तीय सहकारीको एक कुशल अभिभावक पाएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । यो संकटले हामीलाई थप विश्वासिलो बनाएको छ ।
कोभिडले बिशेष गरी सहकारी क्षेत्रलाई सही वित्तीय व्यबस्थापन गर्दै नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित रहेर संस्था संचालन गर्नु पर्ने शिक्षा दिएको छ जुन कुरा नेफ्स्कूनले जोड दिदैं आएको छ । त्यस्तै, सदस्यको हितलाई सर्वोपरी ठानेर सदस्यमैत्री ढंगबाट संस्था संचालन गर्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ ।
सहकारीप्रति सदस्यको धारणा
बैकं तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीमित शाखाहरु मार्फत सीमित समय सेवा प्रवाह गरिरहेको अबस्थामा सहकारी संस्थाहरुले पुर्णकालीन त्यो पनि घरदैलो सेवा प्रवाह गरेका छन् । सदस्यहरुको सम्पर्कका आधारमा आबश्यकता बमोजिम कार्यालय संचालन गरी सेवा प्रबाह गरेको कारण सहकारी प्रति सदस्यहरुको बिश्वास अग्लिएको छ । यद्यपि, शहर केन्द्रीत र बजारमुखी संस्थाहरुले तरलता कम रहेको कारण सदस्यहरुको माग बमोजिमको वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा केही नकारात्मक भ्रम पनि फैलिएको छ ।
तरलता र ऋण परिचालन
नेफ्स्कूनमा पर्याप्त तरलता छ । सदस्य संस्थाहरुको माग बमोजिम क्षमता हेरेर ऋण प्रवाह पनि गरिरहेका छौं । लकडाउनका कारण संस्थाहरुमा कुनै किसिमको तरलता अभाव भई वित्तीय व्यबस्थापनमा कठिनाई भएमा नेफ्स्कून केन्द्रीय कार्यालय वा सहज हुने नजिकको फिल्ड कार्यालयहरुमा सम्पर्क गरी ऋण सुविधा उपभोग गर्न सकिने समेत जानकारी गराउँदछु । संस्थाको तरलता अबस्था मध्यनजर गरी २ देखि ३ दिनको छोटो समयभित्रै ऋण स्वीकृत गरी उपलब्ध गराउने ब्यवस्था समेत मिलाएको जानकारी गराउँदछु ।
फ्रन्टलाईनमा बसेर काम गर्दा कोरोना प्रतिको डर कम हुँदै गएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने मलाई सुरुदेखि नै भय थिएन । कार्यालयमा पनि म साथीभाईहरुलाई यो केही होइन डराउनुपर्दैन, हामी जस्ता युवा र स्वास्थ्यप्रति सचेत व्यक्तिलाई केही हुँदैन भन्दै सहकर्मीहरुको मनोबल बढाइरहेको हुन्थे र अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ । यसबीच त्यस्तो कुनै नमिठो वा अप्रिय घटना केही पनि भएको छैन । हामी सबै फ्रन्टलाइनरहरु स्वास्थ्य सचेतनाका विधिहरु अपनाउँदै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
कलंकी फिल्ड इन्चार्ज
जन्म, परिवार र सहकारी
२०४० साल असोज १९ गते मुकुन्दपूर ७, नवलपरासीमा मेरो जन्म भएको हो । हाल मा कामनपा १६, बनस्थलीमा बुवा कुल प्रसाद चालिसे, आमा पूर्ण कुमारी चालिसे, श्रीमान गोबिन्द चालिसे र छोरा अर्बिन चालिसेसँग बस्दै आएकी छु । विगत ५ महिनादेखि कलंकी फिल्ड कार्यालय इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहदै आएकी मेरो सहकारी यात्रारम्भ २०६८ फाल्गुन १८ गते नेफ्स्कून प्रवेशबाट भएको हो ।
घरमा परिबारसँग समय बिताएँ । अफिस खुलेको बेलामा परिवारलाई यथेष्ट समय दिन नसक्ने हुँदा लकडाउनमा मिलेको केही फुसर्द पूर्णतः घरपरिवारलाई नै दिएँ । खासगरी सानो छोरासँग समय बिताउने मौका मिल्यो । सँगै सदस्य संस्थाहरुसँग पनि नियमित सम्पर्कमा भने रहे ।
सुरुको २ साता कार्यालय बन्द गरे पनि सदस्य संस्थाहरुसँग सम्पर्कमा बस्यौं । चैत्र २८ गते कार्यालय खोल्यौं । तेस्रो त्रैमासिक खाताबन्दी पनि बन्दको बेलामा नै सम्पन्न भयो । त्यसपछि बैशाख २६ गते सम्म सदस्य सम्पर्कका आधारमा कार्यालय तथा घरबाट सेवा प्रदान गरियो । बैशाखको अन्तिम हप्ता सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संचालन गर्ने निर्णय गरे सँगै हामीले पनि सेवालाई पनि निरन्तरता दियौं । जेठ महिना लागेपछि पुनः लकडाउन कडा बनाउँदै आवतजावतमा कठिनाई भएपछि हप्ताको २ दिन आईतबार र बुधबार १० बजे देखि २ बजे सम्म खोल्ने निर्णय गरियो । सदस्य संघ संस्थालाई जानकारी गराएर कार्यालय सञ्चालन गरियो । जेठ २१ गते बाट भने अफिस नियमित रुपमा हप्ताको ६ दिन नै खोलेका छौं । यो बन्दको अबधिमा हामी ३ जना कर्मचारी नै अफिस खोलेको दिन अफिसबाट तथा बाँकी दन घरबाट सदस्य संघ संस्थाको सम्पर्कमा रही सेवामा खटियौं ।
यसको सकरात्मक तथा नकरात्मक दुवै अनुभव रह्यो । परिबारसँग समय बिताउने मौका पाईयो जसलाई सकारात्मक पक्ष मान्नुप¥यो । त्यस्तै अर्को राम्रो पक्ष भनेको सँधै हतारमा हुने भएकोले यो बन्दको बेलामा घरको काम गरेर सदुपयोग गर्न पाइयो । वातावरण स्वच्छ रह्यो । नकारात्मक पक्ष भनेको देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्यो । बन्दले गर्दा कतिको रोजिरोटी नै गुम्यो । कल कारखाना, उद्योगधन्दा सबै बन्द हुँदा जीविकोपार्जनमा नकरात्मक असर प¥यो । बेरोजगारी, आर्थिकमन्दी आदि सबै बन्दले निम्त्याएका नकारात्मक पक्ष हुन् ।
बन्दको बेलामा पनि सेवा निरन्तर प्रवाह गरिएकोले सदस्य संस्थाहरुबाट खासै गुनासो आएन । नेफ्स्कूनप्रति उहाँहरु सन्तुष्ट पाएँ । नेफ्स्कूनले जारी गरेको मार्गदर्शन, निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको भर्चुअल तालिम र शिक्षाको कार्यक्रमले सुरक्षित कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको पाईयो । बन्दको बेलामा संघले प्रदान गरेको ब्याज छुटले पनि सदस्यहरुले राहत अनुभव गर्नुभयो । बैंकहरुले यो बेलामा बचतमा ब्याज दर निक्कै घटाउँदा पनि तुलनात्मक रुपमा हामीले न्यून मात्र परिमार्जन गरेकोले सहकारीको पैसा सहकारीमा भन्ने सोच परिवर्तन भयो ।
हामीले उच्च मनोबल राख्नुपर्दछ । संकटको बेलामा पनि धैर्यपूर्वक काम गर्नुपर्छ । सरसफाई, पूर्वीय संस्कृति (पानीको प्रयोग, नमस्कार गर्ने), बानीको बिकास गर्न कोभिडले सिकायो । संकट जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ, त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्नु पर्छ, आर्थिक संकट पर्न सक्ने अवस्थालाई पूर्वानूमान गरी तयारी पनि गर्नुपर्छ भन्ने सिकायो । त्यसका लागि बचत गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ भन्ने आधारभूत मान्यता स्थापित गराएको छ ।
सहकारीप्रतिको सदस्यको धारणा
सदस्यहरु सकारात्मक नै पाएँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नखुलेको अबस्थामा पनि सहकारीहरुले सेवा निरन्तरता दिएको हुँदा सुखदुःखको समयमा सहकारी चाहिन्छ भन्ने महशुस गरेको पाईयो । बैंकले जस्तो घाम लाग्दा छाता ओढाउने र पानी पर्दा छाता तान्ने काम सहकारीले गर्दैन भन्ने सदस्यहरुले राम्ररी बुझको सदस्य संस्थाका साथीहरुले सुनाउँदा खुसी लाग्छ ।
यो समयमा हामीले खासै ऋण लगानी गरेको छैन । असुलीमा पनि हामीले कडाई नगरेको अवस्था छ । बिस्तारै लकडाउन सहज भएसँगै ऋण माग भएको छ । अब लगानीको तरखरमा छौं । नेफ्स्कूनलाई विश्वास गरेर बचत वृद्धि भएको छ । यसलाई हामीले आर्जन गरेको विश्वासको नतिजा भनेका छौं । कुनै सदस्य साकोसलाई आवश्यक पर्दा हामीसँग पर्याप्त तरलता रहेको जानकारी समेत गराउँदछु ।
कलंकी फिल्ड कार्यालयमा सरुवा भएको साढे २ महिना नपुग्दै कोभिड महामारी फैलिएकाले सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण फिल्डमा सामान्य अवस्थामा जस्तो पूर्णकालीन सेवा अवसर नपाएको अवस्था हो । तर पनि म लगायत फिल्ड सहकर्मीहरु सुरक्षित विधि अपनाएर निश्चित समय तोकेर काम ग¥यौं । सुरुमा केही भय रहेपनि विस्तारै सहज भयो । निरन्तर सेवामा जुट्यौं । यो नौलो अनुभव भयो ।
सूचना प्रविधि अधिकृत, नेफ्स्कून केन्द्रीय कार्यालय
२०३९ साल माघ १४ गते सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गा.पा.६ मा जन्म भएपनि २०५८ सालदेखि काठमाडौं मानपा कोटेश्वरमा श्रीमती र दुई छोरीसँग बस्दै आएको छु ।
सहकारी र अन्य संलग्नता
२०६४ सालमा समवयी साथीहरुसँगको सहकार्यमा सुर्यकोट बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन ग¥यौं जसको कारोबार हाल २० करोड माथि छ । त्यसअघि, कम्प्युटर हार्डवयेर तथा सफ्ट्वेयरमा मा ७ वर्षको अनुभव हासिल गरे । साथीहरुसँग मिली २०६२ सालमा कोटेश्वरमा कस्मिक इन्टरनेशनल स्कूल दर्ता गरी सञ्चालन ग¥यौं जुन विद्यालयमा हाल कक्षा १२ सम्म करिब १५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त विद्यालयमा स्थापनाकालदेखि हालसम्म निरन्तर सञ्चालकको भूमिकामा छु । मैले २ वर्ष शिक्षण र ४ वर्ष लेखापालको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेको छु । २०६८ देखि नेफ्स्कूनमा आबद्ध म २०७५ सालमा उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा समेत साधारण सभाबाट सम्मानित भएको क्षणलाई अत्यन्त सुखद र अविष्मरणीय अवसरको रुपमा जीवनभर सम्झने छु । त्यस्तै, २०७२ सालमा दोलखाको जिरीस्थित ९ वटा सहकारीहरु मिलेर युनाइटेड फ्रेन्डसीप साकोस बन्ने क्रममा प्राविधिक परामर्श र सहजिकरण गरेबापत समेत सोही वर्ष वैशाख ४ गते नगद पुरस्कार सहित सम्मानित गरेको घटना पनि यहाँ स्मरण गर्नु पर्छ । उक्त एकीकृत संस्था नेफ्स्कूनका निर्वतमान अध्यक्ष डीबी बस्नेतको प्र्रारम्भिक संस्था समेत हो ।
सबैको जस्तो कोरोना भाइरसको महामारी र यसका कारण सिर्जित लकडाउन मेरो लागि पनि नौलो अनुभव भएको छ । यस्तो महामारी आउन सक्ने सम्भावना विद्यमान रहेकाले परिस्थिति अनुसार सावधानी अपनाएर जनजीवन सहज पार्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव गरे । बन्दाबन्दी अघि नै श्रीमती र दुई छोरीहरु घर गएका कारण म दाजु भाउजुकोमा बस्दै आएको छु । परिवार र त्यसमा पनि छोरीहरुलाई भने मिस गरेको छु ।
लकडाउनको पहिलो साता केही अलमल र असहज भएपनि त्यसपछि साकोसहरुलाई निरन्तर सफ्ट्वेयर र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छु । यो अवधिमा खासै फुर्सद भएन । हाम्रो सफ्टवेयर सेवा लिनुभएका सदस्य संस्थाहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने र भर्चुअल तालिम अनि सहजिकरण गर्नुपर्ने भएका कारण अरु समयभन्दा बढी व्यस्त भइयो । सँगै विभिन्न संघ संस्थाहरुले सफ्ट्वेयर स्तरवृद्धि गर्नु भएकाले त्यसमा पनि सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने भयो ।
यसबीच करिब ४ दर्जन साकोसहरुले हाम्रो सहयोगमा नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्नुभयो । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवस्थित ५ बचत तथा ऋण सहकारीहरुबीच एकीकरण भएर संयुक्त कोरोबार सञ्चालन गरेको नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालको प्रारम्भिक संस्था हाम्रो एकीकृतबाट यो कामको थालनी भयो । उक्त संस्थामा क्यू आर कोड प्रविधि सञ्चालनमा सहयोग गर्ने संस्थाका सबैलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । उक्त प्रविधिको विकास गर्ने नेफ्स्कूनको साझेदार कम्पनी एक्स्क्लुसिभ माइन्डस् प्रालि पनि विशेष धन्यवादको पात्र छ । स्तरोन्नतिको कामलाई थप व्यबस्थित र समय सापेक्ष विकास गर्दै लाने योजनामा हामी कटिबद्ध छौं ।
यस्तो बिषम परिस्थितिमा कुनै पनि साकोसहरुको सफ्टवेरमा समस्या आउँदा सहजिकरण सेवा उपलब्ध गराएकोमा साकोसहरुले धन्यबाद दिएका छन् । उहाँहरुमा पनि प्रविधिको विकासमा फड्को मारी कसरी सदस्य मैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने उत्कट अभिलाष पाएँ ।
साकोसहरुलाई डिजिटल प्लेटफर्मको रुपमा विकसित गराउनुपर्ने महत्व दर्शायो । हामीले समेत यो विषम परिस्थितिमा नेकोस प्लस सफ्ट्वेयरमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न सफल भएका छौ । सदस्य साकोसहरुलाई पनि सफ्ट्वेयरमा छलाङ मार्न अनुरोध र सहयोग गरेका छौं । यो उल्लेख्य उपलब्धि रह्यो ।
समुदायमा आधारित साकोसहरुले सदस्यहरुलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्नुपर्ने धारणा राखको पाएँ । सहकारीहरुले यो बेलामा समुदायलाई वित्तीय गैरवित्तीय सहयोग गरेर उदाहरणीय काम गरेको भन्दै गैरसदस्यहरुले समेत प्रशंसा गरेको सदस्यहरुबाट जानकारी पाउँदा खुसी लाग्यो ।
हुनत सूचना प्रविधिको युगमा यो विधा फ्रन्टलाइन मा नभई ब्याक लाईनमा नै रहदै आएको छ । किन भने सबैले कारोबार गर्नेलाई मात्र काम गरेको देख्ने र अन्य कार्य भने अदिृष्य रहेको पाईयो । यद्यपि, कार्यालयमा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर म लगायत मेरो समूहका सहकर्मीहरुले एकदमै सुरक्षित तवरले काम ग¥यौं र गरिरहेका छौं । जीवनको अविष्मरणीय घटना भने पक्कै भएको छ । अहिलेसम्म कुनै तीतो अनुभव भने भएको छ्र्रैन ।
बनेपा फिल्ड इन्चार्ज
२०४४ चैत्र ८ गते सोमवार चलाल गणेस्थान वडा नं. ५, पाटीखर्क काभ्रेमा मेरो जन्म भएको हो । हाल म पनौती नगरपालिका वडा नं. १०, खोपासी काभ्रेमा बुबा, आमा भाई सँगै श्रीमती, छोरी र छोराका साथ स्थायी बसोबास गर्दछु । २ वर्ष ४ महिना अघि बनेपा फिल्ड कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि सहकारी क्षेत्रको मेरो अनुभवले भने १ दशक पार गरिसकेको छ ।
लकडाउनको सुरुवाती चरणमा निक्लेको फर्सदको समयमा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा क्रियाशील साकोसका व्यवस्थापन प्रमुखहरुसँग निरन्तर फोन तथा सामाजिक संजालमा सम्पर्क र समन्वयका साथै बचेको समय घरमै परिवारसँग बिताउने काम गरे ।
लकडाउनको समयमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै न्यूनतम सहकर्मीहरुको सहयोग र सहकार्यमा कार्यालय सञ्चालन ग¥यौं । बन्दाबन्दीको सुरुको समयमा साकोसहरुको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समयमा नियमित कार्यालय संचालन ग¥यौं । बन्दाबन्दीको अवधिमा जम्मा ३८ दिन कार्यालय संचालन गरियो ।
आफ्नो जीवनकालमा पहिलो पटक यस्तो महामारी भोगेका कारण सुरुका दिनमा त डरको अनुभव भयो । समय बित्दै जाँदा त्यस्तो भय हटेको र कार्यालयमा नियमित उपस्थित भएर नै काम ग¥यौं । कार्यालय नखुलेको समयमा पनि सम्पर्कका माध्यमबाट सदस्य संस्थालाई वित्तीय र गैरवित्तीय सेवा प्रदान गर्न पाएकोमा गौरव लाग्छ । त्यही भएर सदस्य र समुदायका सबैले सहकारीलाई पहिलो रोजाई बनाउनुभएको छ ।
सदस्यहरुबाट सकारात्मक सुझावहरु आएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बन्द भएको अवस्थामा पनि सदस्य संस्थाहरुलाई आवश्यक तरलता रकम उपलव्ध गराउन सकियो । नियमित सम्पर्क मार्फत समस्या समाधानमा सहभागिता र थप क्रियाशीलताका साथ सहकारीका छाता संघहरुबाट प्रवाह हुने सूचना, मार्गदर्शन तथा निर्देशनहरुलाई अधिकतम साकोसमा प्रवाह गर्न सकिएकोमा सदस्य संस्थाहरु पनि खुसी भएको महसुस गरेको छु ।
सहकारी क्षेत्रलाई महामारीको समयमा पनि निरन्तर सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्न, सुरक्षित तवरले परिचालित हुन र आफ्ना सदस्यहरुको जीवन रक्षा र उन्नतिको निमित्त आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सिकायो । सदस्यहरुलाई पनि बेलामा बचत गर्दा आपतमा काम लाग्दो रहेछ भन्ने शिक्षा दिएको छ ।
सहकारीहरु प्रति सदस्यहरु एकदम सकारात्मक पाएँ । अन्य वैंक वित्तिय संस्थाहरुले सदस्यहरुमा सेवा प्रवाह नगरेको अवस्थामा वैकल्पिक विधिहरु मार्फत सेवा निरन्तरता दिएकोमा सहकारीप्रतिको सदस्यमात्र होइन जनविश्वास बढेको पाएँ । समुदायमा सदस्य केन्द्रित भएर काम गर्दाको रमाइलो नै यही हो जस्तो लाग्छ । यही भावना हामीले यस अवधिमा सदस्यहरुमा पनि विकास गर्न सक्यौं जसले गर्दा संस्थाहरु एकदमै सकारात्मक हुनुभएको छ । संस्थाहरु सकारात्मक भनेको उहाँका सदस्यहरु पनि सकारात्मक भएको अवस्था हो । यसले हामीलाई काम गर्न थप उर्जा प्रदान गरेको छ ।
हाल बचतमा केही बृद्धि भएकोले तरलता बृद्धि भएको छ । ऋण माग पनि भइरहेकोले बन्दाबन्दी पश्चात् लगानी हुने अवस्था देखिएको छ ।
अलिकति डर, धेरै खुसी र रोमाञ्चक नै भन्नुपर्छ । त्यस्तो नरमाइलो र नमीठो अनुभव खासै भएन । जिम्मेवारीबोध भने भएको छ ।
ललितपुर फिल्ड इन्चार्ज
ललितपुर जिल्ला महाँकाल गाउँपालिका वडा नंबर ४ (साविक कालेश्वर गा.वि.स वडा नं ७) मा २०४७ पौष १७ गते मेरो जन्म भएको हो । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २९ हरिसिद्धी, नयाँ वस्ती हजुरबुवा, श्रीमती र छोरा सहित ४ जनाको संख्याले सानो तर मायाले ठूलो परिवार अटाएका छौं ।
पत्तै नपाई १२ वर्षको सहकारी अनुभवको धनी भैसकेछु भन्दा गौरब लाग्छ । २०६५ साल पौष ४ गतेबाट हाम्रो थैली साकोसको कर्मचारीको रुपमा सेवारम्भ गरेको मैले विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्दै २०७० साल देखि २०७५ असोज १५ सम्म सो संस्थाको लेखा तथा प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । तत्पश्चात २०७५ असोज १६ गतेदेखि नेफ्स्कूनमा व्यवसाय अधिकृत (फिल्ड इन्चार्ज) को रुपमा कार्यरत छु । १ वर्ष १० महिनाको फिल्ड कार्यालय नेतृत्वको अवसर मेरा लागि सहकारी पाठशाला भएको छ ।
खासै फुर्सद भएन । २०७६ चैत्र ११ गते बन्दाबन्दी सुरु हुनु ४ दिन अघि अर्थात् चैत्र ८ गते देखि १६ गते सम्म बिदामा थिए । उक्त समयमा जन्म स्थानमा आमा लगायत उतै बस्ने परिवार भेट्न र आफ्नो जग्गामा कृषि कर्ममा जुट्न गाउँ गएको थिए । हरेक वर्ष यो कर्मको पुनरावृत्ति हुन्छ । कृषिप्रधान देशको एक पौरखी कृषक परिवारको परिचय स्थापित गरेका छौं । उपलब्ध जमीनलाई उत्पादनसँग जोड्ने यत्न जारी छ । नेफ्स्कून आबद्ध साकोसहरुलाई कृषि र उत्पादनसँग सदस्यहरुलाई जोड्न घच्घच्याइँरहने हामी आफै पनि सम्भव भएसम्म त्यो भनाइलाई व्यावहारिक परिणति दिनुपर्छ भन्ने निजात्मक मान्यता हो मेरो । बिदाबाट फर्किएपछि सदस्य संस्थाहरुसंग सम्पर्क गर्ने, उहाँहरुको अवस्था बुझ्ने र सम्पर्कका आधारमा सेवा दिन थालियो । बाँकी समयमा सहकारी सम्बन्धि विविध पुस्तक, लेखरचना अध्ययनका साथै परिवारसँग बसेर बिताइयो ।
चैत्र ११ देखि चैत्र २५ सम्म कार्यालय खोलेर सेवा दिएपनि संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुसँग नियमित सम्पर्क गरी अवस्थाको जानकारी लिने काम गरियो भने त्यसपछि सम्पर्कका आधारमा सेवा उपलब्ध गराइयो । २०७७ जेठ ३२ सम्ममा कार्यालय खोलेर ३७ दिन सेवा प्रदान गरियो भने घरमै बसेर पनि सदस्य संगको सम्पर्क, प्रविधि मार्फत सञ्चालन गरिएका कार्यालयका बैठकहरु, विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रममा सहभागिता जनाई बित्यो । सार्वजनिक विदा र शनिवार बाहेक २९ दिन कार्यालय बन्द भयो । एउटा भुल्नै नहुने विषय के हो भने यस्तो महामारीको विषम अवस्थामा पनि ललितपुर फिल्ड कार्यालयमा कार्यरत ५ जना कर्मचारी साथीहरु मध्ये सुचन महर्जन कार्यालय खुलेको दिनमा नियमित उपस्थित रहनुभयो भने आवश्यकताका आधारमा केही दिन सबिता महर्जन पनि कार्यालय उपस्थित भएर सेवामा समर्पित हुनुभयो ।
मानव जीवनलाई चुनौती दिने गरी आएको लकडाउनको सुरुवाती चरणमा केही डर र त्रास थियो । घरमा बस्नुपर्ने स्थितिमा पनि सदस्य संस्थाहरुप्रतिको जिम्मेवारी बोधले मनमा घच्घच्याईरह्यो । खाली समय परिवारलाई प्रदान गर्न पाईयो भने अध्यनका लागी समेत सदुपयोग गरियो । दुर प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले पनि धेरै प्रकारका कामहरु सम्पन्न गर्न सकिदोरहेछ भन्ने अभ्यास गरियो । पारिवारिक समयलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न पाईयो । आफुलाई अध्ययन गर्न मन लागेको तर समय अभावका कारण व्यवस्थापन गर्न नसकेका पुस्तकहरु अध्ययन गर्न सकियो । विषय बोधको दायरा फराकिलो बनाउने सिलसिलामा यो समय मेरा लागि कोसेढुङ्गा सावित भएको अनुभुति गरे ।
लकडाउनमा सदस्य सम्बन्ध
सदस्य संस्थाहरुको नेफ्स्कूनप्रति उच्च हार्दिकता र अगाध माया यो समयमा थप प्रगाढ भयो भन्दा अत्युक्ति नहोला । महामारीबाट बच्न मार्गनिर्देशन, घरदैलो सेवा, निरन्तर सम्पर्क, विभिन्न भर्चुअल कार्यक्रम लगायतका कारण अभिभावक संघको रुपमा नेफ्स्कूनको भूमिकको प्रशंसनीय रह्यो । साकोस अभियानमा नवीनतम प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई सहज बनाई सरकार र सम्बन्धित निकायसँग बहसपैरवी मार्फत प्रतिस्पर्धी वित्तीय बजारमा उत्कृष्ट सदस्य सेवा सुनिश्चितताको वातावरण सृजनामा नेफ्स्कून लागि पर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
परिस्थितिप्रति चिन्ता नभई मनस्थिति उच्च पारी सकारात्मक ढंगले सोच्न सिकाएको छ । उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरी नगदरहित कारोवार गर्न सक्ने अवस्थामा सहकारी अभियान पुग्नुपर्ने आवश्यकता खट्कियो । वित्तीय सहकारी संस्थाको जगेडा कोष तथा मासिक बचत बलियो हुँदा संस्थाको दीगोपनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सन्देश दिएको छ । कृषि प्रधान देशका बासिन्दालाई प्रकृतितर्फ फर्क र आपसी सहयोग र सद्भावलाई थप प्रगाढ बनाउ भन्ने शिक्षा दिएको छ ।
सहकारी अभियानले कमजोर अर्थव्यबस्था भएकाहरुलाई पनि समेटेर उद्यमशीलता विकास गर्न सिकाएको छ भन्ने आम जनबुझाइ छ । सवै वर्ग र क्षेत्रमा सहकारी पहुँच पुगेकाले दुर दराज सम्मका मानिसहरुले सहकारीको माध्यमबाट सेवा प्राप्त गर्न, बचत गर्न, सहज ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएपनि आधारभूत मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरितका केही सहकारीहरुका गतिविधिमा तत्काल सुधारात्मक काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा सदस्यहरुको रहेको छ ।
हामीसँग सन्तुलित तरलता छ । यसको श्रेय सदस्यहरुलाई जान्छ । सदस्य संस्थाहरुको ऋण आवश्यकताको पनि सम्बोधन गर्न सफल भएका छौं ।
फ्रन्टलाईनमा आफु मात्र नभएर सहकर्मीसहित सेवामा जुटियो । यो आफैमा हामी सबैको लागि नौलो अनुभव थियो । कहिलेकाही आवतजावतको मसिना असहजतालाई सदस्य संस्थाहरुको न्यानोपनले ओझेलमा पारिदियो ।
चाबहिल फिल्ड इन्चार्ज
मेरो जन्म २०४२ साल फागुन ३ गते जिरी न.पा ७ दोलखामा भएको हो । हाल म का.म.न.पा.३२ कोटेश्वरमा बुबा, आमा र श्रीमतीको न्यानो माया साथ बस्दै आएको छु । २०६७ सालमा सहकारी क्षेत्र प्रवेश गरेको मैले चाबहिल फिल्ड कार्यालयमा काम गरेको भने २ वर्ष पुगेको छ । करिब १ दशकको सहकारी जीवनमा विभिन्न भूमिकामा रही कार्य सम्पादन गरेको छु ।
भारत, थाईल्याण्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया ।
नियमित व्यायाम, पत्रपत्रिका पढ्ने, समाचारहरु सुन्ने तथा हेर्ने, केही पढ्न छुटेका पुस्तकहरुको अध्ययन तथा हेर्न छुटेका केही सान्दर्भिक चलचित्रहरु हेर्ने र नियमित सञ्चार तथा समन्वयमा रहेर बिताएँ ।
सुरुका दिनहरुमा के हुने हो कसो हुने हो भनेर केही अलमलको अवस्था सिर्जना भएता पनि बिस्तारै सहज वातावरण बन्यो । कोरोना भाइरससँग सुरक्षित रहदै कसरी सेवा दिने भन्ने तर्फ लागियो । काठमाडौंको व्यापारिक क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु मानेर सञ्चालित भएता पनि धेरै सहकारीहरुले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व ठानेर कोभिड–१९ को प्रवाह नगरी दुःखमा परेका तथा फरक ढंगले सक्षम भएका व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गर्ने, खाना खुवाउने, रक्तदान कार्यक्रम चलाउने लगायत विभिन्न स्थानिय निकायको राहत कोष तथा केन्द्रिय राहत कोषमा समेत रकम जम्मा गर्ने अविस्मरणीय काम गरे जसको अनुभव गर्न पाएँ ।
२०७६ चैत्र ११ बाट २५ सम्म जम्मा १४ दिन पूर्णरुपमा कार्यालय बन्द रहेपनि सदस्य संस्थाहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहने काम ग¥यौं । चैत्र २६ बाट बैशाख २५ गते सम्म सम्पर्कको आधारमा बचत फिर्ता तथा बचत लिने सहित केही आन्तरिक कार्य भए भने वैशाख २६ बाट जेठ २५ गतेसम्म निश्चिित समय तोकेर नियमित कार्यालय सञ्चालन भयो । जेठ २६ बाट नियमित रुपमा १०–५ बजेसम्म नै सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौं ।
लकडाउनकै समयमा पनि हामीले प्रवाह गरेको सेवामा सवै सहकारीकर्मीहरु उत्साहित रहनुभयो । लकडाउनको केही समय पछि सहकारीकर्मीहरुबाट कसरी सेवा दिने भन्ने गुनासो रहेता पनि नेफ्कूनले जारी गरेको १९ बुदे निर्देशिका पश्चात केही सहज भएको पाएँ । आशिंक साकोसहरु खुल्न थाले पछि सवारी पासका सम्बन्धमा केही गुनासाहरु सुनिए जुन स्वाभाविक थियो । बन्दाबन्दी पश्चात साकोसमा देखिन सक्ने सम्भावित तरलता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चिन्तित भएको पाएको छु ।
सर्वप्रथम सहकारी अभियानसँग जोडिन बाँकी रहनुभएका साकोसहरुलाई सञ्जालमा जोडिनु पर्नेरहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ । नीति, विधि र प्रविधिको प्रयोग जसरी पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति गराएको छ । बजार केन्द्रित साकोसहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुलाई सेयर खरीद तथा नियमित मासिक बचत जस्ता कार्यक्रमहरुमा अनिवार्य सामेल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान भएको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सदस्यहरुसँग नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा दिएको छ भने लगानी गर्दा सुरक्षित तथा उत्पादनशील क्षत्रमा जोड दिनुपर्ने विषय पनि सिकाएको जस्तो लाग्छ ।
सहकारी प्रति हालसम्म सदस्यहरुको धारणा अत्यन्त सकारात्मक र उर्जाशील रहेको छ भने अब महामारी पछिको समयमा सहकारीले सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने सेवामा एउटा मात्र सहकारीले सजकता र सहजता नअपनाउने हो भने समग्र सहकारी अभियानमा नै दाग लाग्न सक्ने आशंका धेरैमा रहेको पाएँ ।
लकडाउन अबधिमा चाबहिल फिल्ड कार्यालयमा तरलताको कुनै समस्या छैन । बचत केही थपिएको छ । तरलता व्यवस्थापन शीर्षकमा हामीले यस फिल्ड कार्यालयबाट सहुलियत दरमा ऋण लगानी पनि गरेका छौं । साथै कुनै पनि हाम्रो सदस्य साकोसहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्नुपरे तथा तरलता समस्यामा हुनुहुन्छ भने म सम्बन्धित फिल्ड कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु । हाम्रो सम्पूर्ण फिल्ड कार्यालयहरु नियमित सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउँदछु ।
एक दिन कार्यालय आउने क्रममा गौशलामा एक प्रहरीले पास देखाउन अनुरोध गर्नुभयो । हामीले सहकारीकर्मीको परिचय पत्र देखाएपछि उहाँले यो लकडाउन अबधिको ऋणमा के के छुट पाईन्छ, सहकारीले किस्तामा छुट दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । हामीले सहज रुपमा सदस्यको पेशा, व्यापार र व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा छुट दिन सकिने भनेपछि छोडिदिनुभयो । यो सन्दर्भलाई मैले दुई कोणबाट हेरे । एउटा सहकारीकर्मी भएर उहाँको जिज्ञासा मेटाए पछि हामीलाई सहज प्रस्थानको अनुमति दिएर उहाँले सहकारीप्रति सद्भाव व्यक्त गर्नुभयो । अर्को, लकडाउन अबधिमा उहाँको मोबाइलमा किस्ता र व्याज अनिवार्य तिर्न कुनै सहकारीबाट आएको म्यासेज प्रतिको आक्रोश । सायद सहकारीले आफ्नो सदस्यको व्यापार एंव जागिरको प्रकृति हेरेर कोरोना प्रभावित लाईमात्र व्याजमा छुट दिनसक्छ भन्ने हाम्रो उत्तर उहाँलाई चित्त बुझेको हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, यो अवसरका लागि सहकारी अखवार परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । यो विषम परिस्थितिमा फ्रन्टलाईनमा रहेर मलाई साथ दिने मेरा सहकर्मी साथीहरु, जिल्ला संघ र प्ररम्भिक साकोसहरुका नेतृत्व तथा व्यवस्थापनका साथीहरुलाई समेत हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । हामी सबैको यो अवस्थाको योगदान साकोस अभियानमा स्वर्णिम अक्षरले कुदिएर इतिहास बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
न्यूरोड फिल्ड इन्चार्ज
२०४२ भाद्र ६ गते बिहीबार प्रदेश नं १ को सुनसरी जिल्लास्थित धरान उ.म.न.पा १५, पुष्पलाल मार्गमा मेरो जन्म भएको हो । हाल म काठमाण्डौको कपन १०, पञ्चकुमारी मन्दिर चोकमा श्रीमतिसँग बस्दै आएको छु । करिब १४ बर्षको सहकारी यात्राको दौरान नेफ्स्कून केन्द्रिय कार्यालय, ललितपुर फिल्ड कार्यालय, लमजुङ फिल्ड कार्यालय हुँदै १० महिना अघि न्यूरोड फिल्ड कार्यालयको जिम्मेवारीमा छु । यस बीच गत वर्ष अर्थात् २०७६ सालमा नेफ्स्कूनले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट कर्मचारीबाट समेत सम्मानित समेत भएको घटना यहाँ छुटाउन सकिन ।
सहकारी क्षेत्रका नयाँ प्रकाशनहरु बिशेषतः आर्थिक, सामाजिक अनि साहित्यका पुस्तकहरुको अध्ययन, सहकारीकर्मीहरुसँग समसामयिक स्थितिबारे छलफल, लामो समय देखि सम्पर्क विहिन साथीभाईसँग भर्चुअल भेटघाट, किर्तिमान कायम राख्न सफल चलचित्र अवलोकन आदि काम गरेर फुसर्दको सदुपयोग गरे । बुढानिलकण्ठ वडा नं. १०, कपनमा राहत वितरण कार्यमा पनि सहभागी भए ।
अर्को, ऐतिहासिक क्षण भनेको जेठ १० गते लायन्स क्लब ईन्टरनेशनल डिस्ट्रिक “३२५ ए वन” को ८ औ महाधिवेशनमा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी देशभरका ५२९ मतदाता सहभागी भई मतदान सहित सहभागिता जनाउन पाउँदा निकै उत्साहित र खुशी भएँ । नबिनतम प्रबिधि प्रयोग गर्न पाउँदा निकै उत्सुकता र कौतुहलता हुँदो रहेछ ।
प्रारम्भमा कार्यालय खोल्न असमर्थ भएपनि त्रैमासिक खाताबन्दी गर्नुपर्ने भएकोले चैत्र ३० गते कार्यालय खोलियो । प्रशासनले अति आवश्यक कार्यालयलाई पासको व्यवस्था गरेपनि सहकारीकर्मीहरुलाई त्यो सुविधा थिएन तैपनि सुरक्षाकवज सहित, कार्यालय पुगेर कार्य सम्पादन गरे । सदस्य संस्थाहरुसँग नियमित सम्पर्कका आधारमा आवश्यकीय सहयोग सदैव पु¥यायौं । यसबीच सम्पर्कको आधारमा कार्यालय सञ्चालनको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी भौतिक दुरी कायम राख्दै काम गरियो । बैशाख ११ देखि हप्तामा कम्तीमा ३ दिन अनिवार्य कार्यालय संचालन गरेता पनि अरु दिन सम्पर्क र आवश्यकताका आधारमा सेवा प्रवाह गरियो ।
यो बन्दाबन्दी हामी नेपालीहरु अनि हाम्रो पुस्ताको लागि पहिलो अनुभव हो । सुरुमा हामीले केहि समय होला भन्ने ठान्यौ । कफ्र्यू झै ठान्यौ । बिहान सब्जी लगायत अत्यावश्यक सामग्री लिन निस्कने, दिनभर घरमा बस्ने र कहिलेकाही साँझपख समेत बाहिर निस्क्यौं । सुरुवाती चरणमा घरका सदस्यहरुसँग रमाईलो गर्दै र साथीहरुसँग बिभिन्न समूहहरु बनाउदै भर्चुअल गफमा व्यस्त भइयो । १–२ हप्ता रमाइलो नै भयो । मज्जाले आराम गर्ने, बिभिन्न परिकारहरु बनाउने र खाने गरेर बित्यो । पछि बिस्तारै देशले बेहोर्ने आर्थिक संकट बारे चिन्तन गर्न थालियो । कोरोना परिक्षणको दायरा कम हुनु र संक्रमणको दर बढ्नुले केही चिन्ता बढायो । समग्रमा भन्दा सुखदुःखको मिश्रण भयो यो अनुभव जुन हाल पनि जारी छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई पास उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ, जिल्ला तहका बिषयगत संघले कुनै पहलकद्मी नगरेको गुनासो साकोसहरुले गरेका थिए । कार्यालय सञ्चालनको स्पष्ट निर्देशन प्राप्त नभएको गुनासो पनि थियो । न्युरोड फिल्ड कार्यालयको सेवा भने अन्य बैक तथा वित्तीय क्षेत्रको भन्दा उत्कृष्ट, सरल र सहज भएको भन्दै धन्यबाद समेत दिएका थिए साकोसहरुले ।
कोभिडले सहकारीलाई भन्दा पनि आम मानिसलाई यस्तो विपत्तिको घडीमा सहज रुपमा प्रत्यक्ष जोडिएर व्यक्तिगत हेरचाह, सहज सेवा प्रवाह, ऋण लगानी, सापटी आदि सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सहकारीप्रति सदस्यहरुको आकर्षण बढाएको देखिन्छ । दैनिक जीविकोपार्जनको लागि अत्यावश्यकीय बस्तुहरुको वितरण र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न कोभिडले सहकारीलाई सिकायो जस्तो लाग्छ ।
समाजको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीय परिवर्तन सहकारीको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने सर्वोपरि कुनै माध्यम छ भने सहकारी भन्ने सदस्यले अनुभव गरेका छन् । एक का लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने नारा यस बिषम परिस्थितिमा सिद्ध सावित भएको सदस्यहरुले महसुस गर्नुभएको ठानेको छु ।
न्युरोड फिल्ड कार्यालय अन्र्तगतका साकोसहरुमा पर्याप्त तरलता कायम रहेको छ । अधिकांश साकोसका सदस्यहरु व्यवसायी रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द हुँदा पुँजी फ्रिज भएकोले आंशिक मात्र ऋण लगानी भएको छ । स्वास्थ्य सामाग्री र खाद्यान्न व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित साकोसहरुलाई भने ऋण परिचालन भएको अवस्था छ ।
जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा थुप्रै चुनौती र कठिनाईहरुको सामाना गर्नुपर्दो रहेछ । कोभिड संक्रमितहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वास्थ्य समेतलाई ध्यान दिदैं कार्यालय उपस्थित भएर सदस्य संघ, संस्थाहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि बिचलित नभई उत्साह, उत्प्रेरणा तथा जिम्मेवारी बोध गराउने जीवन साथी सुना गुरुङको ठुलो सहयोग पाएको छु । जिम्मेवार व्यक्तिमा आवश्यक जवफदेहिताका बिषयमा घरमा धेरै छलफल भयो । म बसोबास गर्ने क्षेत्रका मानिसहरु धेरैले मलाई नियालेर हेर्नु भएको रहेछ । मेरो काम प्रतिको दृढता, लगनशीलता र अठोटले सहकारी क्षेत्रले यस्तो विषम अवस्थामा पनि सदस्यहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दो रहेछ भन्ने छवि स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका स्थापित भयो । सधंै साकोसका ब्यवस्थापकहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर कार्यालय संचालन गर्न उत्प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्ने उच्च व्यबस्थापनका सरहरुसँगै, अहोरात्र काममा खटिने थलप्रसाद चौलागाई (विष्णु दाई) लगायत केन्द्रीय कार्यालयका सबै जना र मेरो फिल्ड अन्तर्गतका साथीहरुको सहयोगप्रति पनि कृतज्ञ छु ।
कञ्चनपुर फिल्ड इन्चार्ज
२०४६ चैत्र १० गते भिमदत्त न.पा– १८, कञ्चनपुरमा मेरो जन्म भएको हो जहाँस्थित घरमा आमा, श्रीमती र छोरी सहित ४ जना स्थायी बसोबास गर्दै आएका छौं । सहकारी क्षेत्रको कुरा गर्दा म ११ वर्ष अघि प्रवेश गरेको हो । हेर्दाहेर्दै करिब १ दशक बित्न लागेको पत्तै भएन । नेफ्स्कून आबद्ध भएकै ७ बर्ष १ महिना पुग्यो । यस अवधि पुरै मैले कञ्चनपुर फिल्डको नेतृत्व लिएको छु ।
कार्यालयमा लकडाउनको मापदण्ड पालना गर्दै स्यानिटाईजर मास्क, पन्जा जस्ता सुरक्षाका उपायहरु अपनाई फिल्ड कार्यालय मार्फत साकोसहरुलाई सेवा दिएँ । एकदमै नौलो अनुभव भयो । केही समय त डर पनि लाग्यो । पछि सहज रुपमा लिएर सबै सहकर्मीसहित काममा जुटेँ ।
फिल्ड कार्यालय कञ्चनपुर भारतीय सिमासँग जोडिएको जिल्ला भएको हँुदा स्थानीय प्रशासनद्धारा सुरुका दिनहरुमा कडा गरिएकोले घरमै परिवारसँग समय बिताएँ । घरमा सहकारी सम्बन्धी बिभिन्न किताबहरुको अध्ययन तथा नेफ्स्कूनद्धारा सञ्चालित भर्चुअल तालिम र बैठकहरुमा सहभागी भएँ । कार्यालय नखोले पनि सदस्य संस्थाहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेँ । विभिन्न अनलाईन बैठकबाट प्राप्त सल्लाह सुझावहरु सदस्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने काम गरँे । कार्यालयका बाँकी रहेका काम पनि घरबाट गरियो ।
फिल्ड कार्यालय कञ्चनपुरमा २ जना कर्मचारी मात्र रहेकोले सहकर्मी दिपकराज जोशीले बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म दिनको २ घण्टा लकडाउनको मापदण्ड भित्र रही स्यानिटाईजर, मास्क, पन्जा जस्ता सुरक्षा सामाग्री प्रयोग गर्दै साकोसहरुमा सकेसम्म सम्पर्कका आधारमा संस्थामै सेवा पुर्याउनुभयो । सदस्यहरु कार्यालयमा सेवा लिन कार्यालयमा आउँदा समेत डेटोल, स्यानिटाईजर जस्ता सुरक्षाका उपायहरु अपनाएर मात्र कार्यालय प्रवेशको वातावरण मिलाएका थियौं ।
सदस्य संस्थाहरुको सहकारी धारणा
सदस्य साकोसहरुले बन्दाबन्दीको समयमा पनि नेफ्स्कूनलेअभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै बिभिन्न अनलाईन तालिम तथा शिक्षा मार्फत सदस्यहरुलाई मार्ग निर्देशित गरेको, निर्देशिका निर्माण गरी सेवा निरन्तरतामा सहयोग गरेको, समस्यामा परेको सदस्यहरुलाई परामर्श प्रदान गरेको भन्दै साकोसहरु नेफ्स्कून र समग्रमा सहकारी प्रति नै खुसी भएको पाएँ ।
तरलता र ऋण लगानी
लकडाउनको समयमा बैंकहरुले बचतको व्याज घटाएकोले साकोसहरुले सुख दुःखको अभिभावक नेफ्स्कून भन्दै हामीसँग बचत जम्मा गरेको स्थिति छ । लगानीको अवस्था पनि बिस्तारै बढ्दै गएकोे स्थिति छ ।
सहकारीहरुको भावी दिशा
केही समयसम्म कोरोना भाइरसको प्रभाव रहिरने भएकाले साकोसहरुले सुरक्षा मापदण्डहरु (भौतिक दुरी, मास्क, स्यानिटाईजर, पन्जा) सहित थप उर्जावान भएर सदस्य सेवामा लाग्नु पर्दछ । सदस्य संस्थाहरुले पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित रहेर अघि बढ्दा सहकारीको भविष्य अझ सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । हामी सबै सहकारीकर्मीहरु दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने सहकारीको भविष्य उज्जवल छ ।
जनकपुर फिल्ड इन्चार्ज
२०४९ साल मंसीर ५ गते प्रदेश नं २ को सर्लाही, हरिवनमा मेरो जन्म भएको हो । मेरो परिवारमा आमा, २ दाइहरु, २ भाउजुहरु, २ छोरी र १ छोरा सहित ९ जना छौं । हाम्रो संयुक्त परिवार भएपनि म भने कार्यालयको कामको सिलसिलामा धनुषाको जनकपुरमा एक्लै बस्छु । परिवारका अन्य सदस्यहरु भने हरिवनस्थित घरमा बस्नुहुन्छ ।
यो क्षेत्रमा लागेको ८ वर्ष लागेको छ । खासमा नेफ्स्कून प्रवेश नै सहकारी प्रवेशको प्रथम खुट्किलो हो । २ वर्षअघि जनकपुर फिल्ड कार्यालय स्थापना भएदेखि यहाँ कार्यरत छु । नेफ्स्कून प्रवेश गरेको भने ६ वर्ष भयो ।
लकडाउनको समयमा समेत सहकारीका अध्यक्ष, व्यवस्थापकहरुसँग नियमित फोन सम्पर्क गरे । बचेको समय घरको काममा सहयोग गरे । परिवारसँग समय बिताए र केही पुस्तक पनि पढेँ ।
लकडाउनको समयमा चैत्र ११ गते देखि वैशाख ९ गते सम्म बन्द गरेपनि सम्पर्कमा रहियो र आवश्यकताका आधारमा वैकल्पिक विधिबाट सेवा प्रदान गरियो । त्यसबीच पनि आन्तरिक कामका लागि २ दिन कार्यालय संचालन गरियो । वैशाख १० गते पश्चात सम्पर्कको आधारमा नियमित रुपमा कार्यालय संचलान गरेका छौं ।
लकडाउन मेरो लागि मात्र हैन विश्वकै लागि नौलो अनुभव भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा मैले पनि नयाँ अनुभव गरे । भौतिक दुरी कायम गरी सबै कार्य सम्पादन गरियो । सुरुमा लागेको डर कतिबेला उर्जामा रुपान्तरण भयो पत्तै भएन । त्यही सकारात्मक उर्जाले काममा खटिरहने प्रेरणा दियो जस्तो लाग्छ ।
सदस्यहरुले संस्था संचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, ऋण असुली, भविष्यका चुनौतीहरुको सामना आदि समसामयिक विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो र अझै पनि छ । यस्ता समस्याको सामना गर्न नेफ्स्कूनको निरन्तर मार्गदर्शन, संभावित तरलता समस्यामा सहयोग आदि माध्यमबाट नेफ्स्कूनले सहयोग गरोस् भन्ने लगायतका सुझाव सदस्यहरुको रहेको छ ।
कोभिडले सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सिकायो । प्रविधि मैत्री कर्मचारी संगै सदस्यहरुलाई समेत वित्तिय र प्रविधि साक्षरताको लागि प्रेरणा दिएको छ । सिमित स्रोत र साधनले पनि कार्यालय व्यावस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सिकायो ।
साकोसहरुले बन्दाबन्दीको समयमा अत्यन्त सावधानी अपनाएर कार्यालय संचालन गरेका छन् । समुदायमा संचालन भएका सहकारीहरु प्रति सदस्यहरुको व्यापक सकारात्मक धारणा पाएँ । सदस्यहरुको हेरचारमा सहकारीहरुको सक्रियता व्यापक पाएँ । जोखिम व्यबस्थापनका विषयमा सदस्य शिक्षा कार्यक्रमहरु संचालन भएको, बीमा लगायतको जानकारी गराउदै त्यसमा समेत सहकारीहरु ले योगदान गरेको पाएँ । सदस्यहरुले सहकारी हाम्रो संस्था भएकोले यसको संरक्षणको दायित्व समेत हाम्रै हो भनेको पाएँ । सदस्य केन्द्रित नभएका र समुदायमा आधारित नरहेका सहकारीहरु प्रति सदस्यहरु पुर्ण विश्वस्त हुन नसकेको पाएँ ।
यस फिल्ड कार्यालयमा हाल ऋण लगानी र तरलताको अवस्था राम्रो छ, लकडाउनको समयमा झन्डै राम्रो बचत वृद्धि भएपनि ऋण भने प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्था हो ।
मेरो घर जनकपुरबाट पश्चिम ७३ किमि टाढा छ, लकडाउनको बीचमा कार्यालय जानुपर्ने अवस्था आयो तर पास थिएन । आफ्नो परिचय पत्र समेत जनकपुरमा नै छुटेको थियो । जसरी पनि जनकपुर जानु पर्ने थियो । नेफ्स्कुनको कार्यालय मेरो घर छेउ हरिवनमा समेत भएकोले कार्यालय गई परिचय पत्र राख्ने होल्डर मागेर त्यसमा आफ्नो भिजिटिङ कार्ड राखी जनकपुर आउँदा अत्यन्त डर लागेको थियो । काम गर्नै पर्ने र कार्यालय पनि आउनै पर्ने भएकाले त्यसरी कार्यालय हाजिर भएको घटना सम्झन्छु ।
२०७७ असार ५ गते , शुक्रवार
नेफ्स्कूनका ‘फ्रन्टलाइनर’ हरु ...